Otu esi etinye Brave Browser na openSUSE Leap 15 - LinuxCapable
Sunday, October 24, 2021 by Jọshụa James
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Brave na openSUSE Leap 15.
Maka sistemụ mepere emepeSUSE, ngalaba nchekwa atọ dị ugbu a kwesịrị ibubata n'otu n'otu na sistemụ gị. Ozugbo emechara, a na-agbakwunye ha na-akpaghị aka na repolist gị, yabụ na ịgaghị achọ ibudata ndị a ọzọ iji melite Brave n'ọdịniihu.
Ugbu a ị nwere ike ịwụnye ngwugwu RPM site na iji onye njikwa ngwugwu zypper.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịwụnye Brave Beta ma ọ bụ arụ ọrụ abalị ma ọ bụrụ na ị budatala ebe nchekwa. A naghị atụ aro ụdị abụọ a maka ojiji kwa ụbọchị, ọkachasị ọ bụghị na desktọpụ isi ma ọ bụ ihe nkesa mmepụta. Otú ọ dị, maka ndị chọrọ ibi na nsọtụ, ị nwere ike ịwụnye nsụgharị ndị ọzọ.
Ịdọ aka ná ntị - Ụdịdị ndị a nwere ike ịnwe ntụpọ nchekwa mgbe a na-anwale. Ejila ihe ndị a ma ọ bụrụ na ị nweghị ike ịkwado ihe ize ndụ ahụ.
The oge mbụ Ị mepee Obi Ike, ị ga-ekele gị site na mmapụta ndị a na-ajụ ma ị ga-achọ ịtọ Brave dị ka ihe nchọgharị ndabere:
Ka imelite Brave Browser na sistemu OpenSUSE, mee ihe ahụ zypper nweta ume nye iwu na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Ma nke ahụ bụ ya, na mmelite ọ bụla kwesịrị itinye n'ọrụ ozugbo. Ekwesịrị ime nke a kwa ụbọchị ma ọ bụ oge ọ bụla enwere ike n'ihi na nke a ga-emelite ngwugwu gị niile.
Categories openSUSE Tags Nchọgharị Obi Ike, megheSUSE Leap 15 Mail igodo
Otu esi etinye Sails.js Framework na Nginx na Rocky Linux 8
Otu esi etinye & hazie Git na Linux Mint 20